Ukufuya iZinyosi eNingizimu Afrika
Into ebaluleke kunazo zonke abashayeli bezinyosi abasha eNingizimu Afrika bayodinga lapho beqala ukuloba ulwazi. Kuzodingeka uqonde izinqubo ezithile zokuphatha izinyosi, isakhiwo se-hive, imisebenzi yezinyosi, umzimba wayo nokuthi udla kanjani, ukudla okuthandayo, izilwane nezidumbu.
Abashayi bezinyosi abasha bazodinga isidumbu (noma i-bee koloni), isidleke kanye nendawo yokubeka isidleke, esondele ngokwanele emthonjeni wokudla izinyosi. (Umthombo omuhle we-forage namanzi uyoveza isivuno esihle kakhulu soju.)
Izambatho zokuvikelwa kanye namanye amathuluzi okusebenza ngomswakama kanye nekoloni kuzodingeka futhi.
I-apitherapy iyisetshenziswa semikhiqizo yezinyosi zokwelapha nokuvimbela izifo. Ngokusho kwe-American Apitherapy Society, le mikhiqizo ehlobene nezinyosi ihlanganisa uju, impova, i-propolis, i-royal jelly nesihhlungu sezinyosi....more
Izindlu zeZinyosi Zabalimi
Lapho uqala ukufuya izinyosi umlimi omusha wezinyosi udinga isidleke. Inyosi lapho izinyosi zizohlala khona, ziphakamise izinyosi ezintsha, zigcine indlovukazi yazo ebeka iqanda eliphephile futhi ikhiqize uju nezinye izinto...more
Iphrofayli yabafuyi bezinyosi eNingizimu Afrika (SA) ayihluki kakhulu kulo lonke izwe. Ngaphansi kuka-5% wabaningi bezinyosi e-SA ngokwabo umhlaba lapho bahlala khona ngaphansi kwama-5%...more
Izinyosi 'zidumile' ngobusi bazo (kanye neminye imikhiqizo) ukuthi zikhiqiza. Kodwa kuye kwaba nokuqwashisa okwandayo kwezinyosi ezibalulekile ezinikezwa izitshalo zokuvotela...more
Izidingo Zezinyosi Nokuvuna iZilimo
Ngaphandle kokubhalisa imihlathi yabo, kunesidingo esithile sabathengi bezinyosi ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuvundisa izitshalo zokudla. Umcwaningi wezolimo we-Agricultural Research...more
Izinyosi zoju izinambuzane zenhlalakahle futhi ahlala emakoloni amakhulu. Ikoloni ngayinye iqukethe owesifazane owodwa ovundile (indlovukazi) nezinkulungwane eziningi zezinyosi...more
Inkinga enkulu eNingizimu Afrika eholele kule lag imithombo ekhonjiwe yama-nectar. ENingizimu Afrika, kuphela u-15% wohlu okhishwa yizihlahla zomdabu uma kuqhathaniswa nama-70%...more
Impova yizinto ezikhiqizwa yi-anthers yezitshalo ezizala imbewu. Iqukethe i-pollen emihle yezinhlayiyana eziqukethe i-gametes yesilisa (isitshalo sezinambuzane zesitshalo)....more
Ukugcina izinyosi kungaba yinto yokuzilibazisa yangaphandle, kodwa futhi ingakhula ibe ibhizinisi eligcwele lokuhweba. Umthengisi wezinyosi ozohweba uzokwazi ukunikeza izinsizakalo zokuvota nokukhiqiza...more
Ukuba nolwazi mayelana nezinambuzane nezifo ze-honeybee kubalulekile kubanikazi bezinyosi ukuqinisekisa ukuthi izimpukane ezinempilo kanye nemikhiqizo ehlobene nezinyosi ephezulu. Ukuze ulawule uphinde uphathe...more
Izinyosi zezinyosi zidinga ukudla ukuze ziphile futhi zikhiqize. Badinga ama-carbohydrate (ushukela eklaleni noma uju), ama-amino acids (amaprotheni avela empova), lipids (amafutha acids, ama-sterols)...more
Abavolontiya, ngokuvamile, banikeza izinzuzo ezihlukahlukene kubantu. Inhlalakahle yethu ixhomeke kakhulu kwimvelo ehlukahlukene kanye nemisebenzi yabo. Ngokwezinga elikhulu...more
Ngaphandle kokudla okunomsoco kanye namandla okuhlinzeka ukudla, uju uye waziwa kusukela ezikhathini zasendulo ukuba abe yi-antimicrobial and antibacterial....more
Izinyosi zidinga amanzi ngezinhloso ezimbili eziyinhloko. Okokuqala, amanzi asetshenziselwa ukunciphisa uju okhanyisiwe ukuze angenezelwe ekudleni. Okwesibili, ama-honeybees...more
Into ebaluleke kunazo zonke abashayeli bezinyosi abasha eNingizimu Afrika bayodinga lapho beqala ukuloba ulwazi. Kuzodingeka uqonde izinqubo ezithile zokuphatha...more